Mbido EGO AFRICAN FOOTBALL Ilaix Moriba Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Ilaix Moriba na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezin’ulo ya, enyi nwanyi / nwunye ya ibu, ibi ndu, ndu nke onwe ya na uru ya.
Na nkenke, anyị na-egosipụta akụkọ ndụ nke ụmụ amaala Guinea amụrụ ama nke ọma dị ka Ilaix. Lifebogger malitere akụkọ a site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama na egwuregwu mara mma.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ọdịnala gị na-atọ gị ụtọ na ọdịdị nke Ilaix Moriba's Bio, lee ụlọ ngosi ihe osise nke ndụ ya ma bilie. N'okpuru ebe a, ọ na-egosi nchịkọta ihe osise nke njem ndụ ya.
Ihe omuma nke Ilaix Moriba. Lee, mbido ya na ọganiihu Akụkọ.
Ee, mụ na gị maara na ọ bụ nwata a kara aka maka ịdị ukwuu egwuregwu. N'ihi ahụ ya na okike ya na-eweta egwuregwu ahụ, Moriba nwere ebu nke abụọ Football greats. Nke mbụ bụ French ndị ịgba ọsọ Paul Pogba na nke abụọ bụ akụkọ akụkọ Ivory Coast - Yaya Toure.
N'agbanyeghị otuto ndị e nyere na talent ndị ntorobịa, ndị otu anyị ghọtara - na ọ bụghị ọtụtụ ndị maara ama akụkọ Ilaix Moriba's Life Story. Anyị ewerela oge anyị iji mepụta akụkọ ya - maka ịhụnanya bọọlụ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Ilaix Moriba Childhood Akụkọ:
Maka ndị na-ebido Biography, ọ na - aza aha - 'Pogba nke Barca'. A mụrụ Moriba na 19th ụbọchị nke Jenụwarị 2003 na nne Guinea, Aissata Kourouma na nna Liberia, Mamady Kourouma. Ebe omumu ya bu Conakry, isi obodo Guinea na West Africa.
Ọnọdụ Tupu Amụọ Ya:
Iji kwuo eziokwu, a gaara amụ ya ma zụlite ya na Liberia ma ọ bụghị maka agha obodo bibiri mba nna ya. Lifebogger nwere obere vidiyo nke gosipụtara ihe mere tupu nne na nna Ilaix Moriba enweta ya.
Central midfielder bụ otu n'ime ụmụ nwoke ole na ole amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya. Dị ka anyị maara, Ilaix toro na ụmụnne ya abụọ. Foto dị n'aka ekpe bụ Lass Kourouma na n'aka nri bụ Eze Siriki Kourouma.
Zute ụmụnne Ilaix Moriba - Lass Kourouma na King Siriki Kourouma.
Ilaix Moriba Ezigbo Ezinụlọ:
Site na ihe ịga nke ọma nke FC Barcelona, ​​ọtụtụ ndị na-agba bọl na Liberia na Guinea na-anụ ugbu a banyere ezinụlọ Kourouma. Site na mbido (kemgbe ọ bụ nwata), ọ dịghị onye maara ezinụlọ Ilaix Moriba.
Nnyocha na-egosi na onye midfielder nke Barcelona amaliteghị ndụ dị ka nwatakịrị bara ọgaranya. Ilaix Moriba sitere na ndi otu ndi otu ulo akwukwo ndi nwere obi uto ighapu na Guinea rue Spain - n'oge obu nwata.
Ilaix Moriba Ezinụlọ:
Dabere na blog Liberia - SportsOnline, Nna ya na Mama si mba abụọ dị iche iche dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Africa - Liberia na Guinea. Agbanyeghi na amụrụ na Conakry (Guinea), obodo nne ya, mgbọrọgwụ ezinụlọ Ilaix Moriba abụghị isi obodo.
Dị ka ọdịbendị Africa si kwere, ebe nna ya, mpaghara ime ime nke Lofa County na Liberia bụ mmalite ya. Nke a bụ ebe papa ya, Mamady Kourouma, si.
Ghara ichefu, George Weah bụ onye isi ala Liberia ugbu a - obodo ọdịda anyanwụ Afrịka ebe nna Ilaix na -apụta. Agha Obodo nke Abụọ nke Liberia, nke weghaara mba ahụ site na 1999 ruo 2003, mere ka ọtụtụ ụmụ amaala ya gbaga Guinea nso.
Maka nke a, Ilaix Moriba amughi na obodo nna ya, nke eserese na eserese dị n'okpuru.
Agha obodo Liberia bụ ihe kpatara nna Ilaix Moriba ji gbapụ mba ahụ gaa Guinea.
Na mba nne ya nke West Africa, Ilaix Moriba bu ụzọ hụ obosara ndụ. Kpọmkwem ọnwa asaa ka ọ bịara n'ụwa, Agha nke Abụọ nke Abụọ biri - na nna nna ya.
Na Guinea - afọ abụọ mgbe a mụsịrị ya - ọnọdụ akụ na ụba siri ike manyere nne na nna Ilaix Moriba ịhapụ mba ọdịda anyanwụ Africa gaa Spain. Nke a bụ maapụ na-egosi ebe obodo nne ya si.
Nke a bụ Guinea, nne nna Ilaix Moriba. Ezigbo akụ na ụba mere ka ezinụlọ ya kwaga Spain.
Ilaix Moriba Mmụta:
Kemgbe nwatakịrị, ọ bụ nrọ ya ka ọ gbaa bọl maka ndụ. Ndị mụrụ Ilaix Moriba siri ọnwụ na ọ ga-aga akwụkwọ ma soro agụụ ya.
Kpamkpam na Cornellà de Llobregat (obodo dị na Catalonia, Spain), nwata ahụ nwere agụmakwụkwọ mbụ ya. Mgbe ọ nọ ebe ahụ, ọ bịara nwee ike igosi egwuregwu ahụ wee malite ịga ule ikpe bọọlụ - mgbe ọ dị afọ asatọ.
Ilaix Moriba Football Akụkọ:
Kemgbe ọ bụ nwata, ejiri kpakpando ndị na-eto eto mee ka ha nwee ọmarịcha abụ nke FC Barcelona's Força Barça! Nkebi ahịrịokwu ahụ pụtara "Ike maka Barca". Site na nke a, ọ rọrọ nrọ football site na mbido.
Nke a bụ abụ nke kpaliri Ilaix Moriba ebumnuche n'ịchọ ịbụ onye na - agba bọọlụ.
Força Barça bụ nnukwu abụ eji akwado nnukwu ọgbakọ Spanish. N'ezie, ọ bụghị naanị ya, mana ndị niile nọ n'ezinụlọ Ilaix Moriba bụ ndị na -akwado Bar Barcaa. Ọ bụ ọchịchọ nwa anyị nwoke ka ọ malite ọrụ ya na klọb Spanish.
N'adịghị ka atụmanya FC Barca ya, mmalite ndụ ebe ahụ emeghị. Ilaix na 2008 bidoro na RCD Espanyol. Dị ka e si na maapụ ahụ hụ, nke a bụ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ agbata obi - naanị munites iri na otu site na ebe obibi FC Barcelona.
N'ime agụmakwụkwọ RCD Espanyol, ọtụtụ ndị maara ya n'oge ahụ nwere ike gbaa akaebe na Moriba pụtara n'ezie n'etiti ndị otu ya.
Bearly otu afọ nke ọnụnọ ya n'ụlọ akwụkwọ egwuregwu bọọlụ, ọ ghọrọ otu n'ime ụmụaka kacha agba bọọlụ na Catalonia niile.
Otu nwoke, Oscar Hernandez, onye rụrụ ọrụ dị ka onye nchịkwa na ụlọ akwụkwọ ntorobịa nke Barcelona na 2007, na-echeta nke ọma ihe Ilaix Moriba mere ndị otu ya.
Ọ na-akọwa nwatakịrị ahụ dị ka onye mere ka ndị ntorobịa Barca nwee ọtụtụ nsogbu. Nke a mere oge ọ bụla ọ gbanwere megide ha dị ka onye ọkpụkpọ Espanyol. N'ikwu okwu na mgbasa ozi Spanish, Oscar kwuru otu oge;
MGBE O BU ILAIX MORIBA NA EGWURU ULU ESPEOLOL YA N’ULU BARCA LE MASIA, HA TUTE ỌTOTT..
NWOODU DI MMA MAKA EBIBI N’AGBARA ND O ỌHPPR. YA.
ILAIX B ON NA ABIFR D --B --R - DEB --R - - ỌZỌ KWESVR PH NKE NA-ECHICHE karịa ndị ọzọ na-egwu egwuregwu. N'IHI NA O KWURU ANY G NSOGBU GRA, BARCA KA O BARA YA.
Ndụ mbido na La Masia:
Tụkwasị klọb a, FC Barcelona! N'ikpeazụ, ha kpagburu ndị agbata obi ha (RCD Espanyol) ka ha napụ ha nwata nwoke ahụ.
Ozugbo Ilaix sonyeere Barca na 2010, o mezuru nrọ nwata ya nke izute nnukwu arụsị ya.
Ọ bụghị onye ọzọ karịa akụkọ akụkọ Barcelona - Lionel Messi. Football nyere ya ohere ịnọ nso ma mụta site na akara ngosi Argentine.
Ilaix Moriba zutere Lionel Messi dị ka nwatakịrị.
N'ọgbọ egwuregwu, Ilaix Moriba abụghị onye egwuregwu bọọlụ nwere ụdị Barca. Nke a bụ n'ihi na ọ buru oke ibu, nwee ahụ mara mma, na-eme ihe ike, yana nwee mmeri na-agba bọọlụ nke dabara nha ya.
The starlet Guinea bụ ụdị na-achọ mgbe niile ịkụ ndị na-egwu ya ụzọ ka ọ banye na bọl. Echefula, ọ na-egwuri egwu n'akụkụ Ansu Fati na La Masia.
Obi dị m ụtọ na ha abụọ etolitela wee nwee mmekọrịta chiri anya.
Ilaix Moriba Biography - Okporo tozọ A Ma Ama:
Nwa anyị nwoke nwetara aha kasịnụ nke ọrụ ntorobịa ya na Ọ BAL ỌMA ỌMA nke o meriri na August 2018. wonderfulbọchị ahụ magburu onwe ya, ndị otu Real Madrid nke Juvenil B (n'okpuru 19s) gafere Spain na mpaghara Catalan.
N'ime asọmpi tupu oge a, ha gbabara na Barcelona, ​​onye tufuru ha 5-0. Ndị egwu Real Madrid agaghị echefu otu nwa nwoke nke mebiri obi ha.
Nwa nwoke dị afọ 15 na-atụ egwu, Ilaix Moriba, gbagburu GOAL WONDER. Ndị na -akwado ya enweghị ike ichefu ihe mgbaru ọsọ a ọsọ ọsọ.
Dị ka ọtụtụ ndị ọkachamara n'egwu bọọlụ siri kwuo, ihe mgbaru ọsọ ahụ gosiri na Ilaix nwere ihe pụrụ iche. O nwere agwa nke na -eme ka ọ dị iche na ndị egwuregwu agụmakwụkwọ ndị ọzọ (tupu na mgbe etinyere ya) onye na -ata nri nke 6.
N'ịchụso ihe mgbaru ọsọ mara mma nke imebi onye mgbaru ọsọ Real Madrid, Ilaix nwetara ọtụtụ nnukwu ebumnuche, dị ka a na -ahụ na vidiyo dị n'okpuru.
Ebumnuche vidio ahụ dị n'elu na-eme ka anyị ghọta na ọ bụ onye ọkpụkpọ igbe zuru oke dị ka Akụkọ Ochie Xavi Hernandez. Inwe Sergio Busquets Njirimara, Ilaix nwere ọganihu n'ịgbaji egwuregwu ndị mmegide.
Ilaix Moriba Bio - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Ị maara?… Barcelona fọrọ nke nta ka Moriba nwụọ mgbe ọ gbara afọ 16. N'oge ahụ, ọtụtụ klọb kachasị elu na Europe (Chelsea, Juventus, na Man City) gbara okirikiri, gbuo isi, ma rịọ maka mbinye aka nwata ahụ.
FC Barcelona tụrụ egwu n'ihi oge gara aga. Cheta, ha otu ugboro tufuo ọtụtụ isi ikike n'oge a - site na Cesc Fabregas na Gerard Pique Ọzọkwa Eric Garcia.
Jonathan Barnett, onye nwe Stellar Football LTD, ghọrọ onye ama ama nke oge ahụ. Ọ bụ onye nnọchi anya Gareth Bale, wee merie n'ọsọ ahụ ịnọchite anya Ilaix Moriba.
Dị ka akwụkwọ akụkọ Forbes si kwuo, nwoke a siri ike bụ onye na -ahụ maka egwuregwu bọọlụ kachasị n'ụwa.
Onye nnọchi anya ya mere ka FC Barcelona mebie akwụkwọ nyocha ha iji chekwaa ikike ntorobịa ha. Ọgụ mkparịta ụka siri ike metụtara nna Ilaix Moriba, Mamady Kourouma - onye na -azụkwa ahịa.
N'ikpeazụ, Ilaix nwetara ụgwọ ọnwa nde euro abụọ na nkebi njedebe nke nde euro 100. N'ihi ụgwọ ọrụ ahụ, ọdịmma ego ezinụlọ ya gbanwere ruo mgbe ebighi ebi.
Mpụta ahụ agaghị echefu echefu:
Ike ya pụrụ iche, nke o gosipụtara na ọkwa FC FC, nwere obi ụtọ Ronald Koman, bụ onye lere ya anya dị ka otu egwuregwu mbụ. Onye nchịkwa Dutch wetara 'ọla' ahụ n'etiti oge nsogbu maka ndị otu ya.
Ilaix Moriba enweghị ike ihi ụra abalị tupu ya amalite. Na 18 afọ na 25 ụbọchị, ọ ghọrọ onye ọkpụkpọ kachasị nta kemgbe mmalite narị afọ iji nye aka. Moriba nyere aka Francisco Trincão na mbido LaLiga ya.
Ka otu ọnwa gachara, ọ na-akwụghachi okwukwe ndị klọb nwere na ya site n'ịgba na mmalite ya. Lelee vidiyo dị egwu n'okpuru ebe o were enyemaka ahụ mara mma site n'aka Lionel Messi iji nweta akara Ọ ga-echezọ.
Imeri azụ nke ụgbụ ahụ mere ka e nwee ebili mmiri n'egwuregwu bọọlụ zuru ụwa ọnụ, si otú a na-eme ka ọtụtụ ndị na-agba bọọlụ jụọ… Nke a bụ ihe kpatara anyị ji dee Biography.
Obi abụọ adịghị ya, FC Barcelona na-achọ ịhụ otu n'ime ha na-eto eto ụzọ ya. Ilaix na-abụ ọsịsa kacha mma na ụwa.
Foto dị n'okpuru na-agwa ya akụkọ zuru oke. Ọ na - eme ka ikwenye anyị na ọdịnihu ga - adị ime mgbe niile. Dị ka anyị na-ekwu banyere Ilaix Moriba Bio, ndị ọzọ bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Inwe olile-anya na agbanwe ihe niile. Nke a bụ akụkọ banyere Ilaix Moriba.
Ọnye na-bụ Ilaix Moriba Dating?
Ka emechara onwe ya aha n'egwuregwu ahụ, ọ dị mma ka ndị egwu malite ịjụ ajụjụ gbasara ndụ ịhụnanya ya.
Karịsịa nke nwere oke na ọchịchọ ịmata ma bọọlụ nwere enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye ọ ga -abụ. Nke a abụghị ihe ijuanya, dịka ndị Afrịka ibe ha si amasị Ismaila Sarr (mgbe ọ dị afọ) lụrụ di na nwunye tupu o nweta aha.
Dị ka n'oge a na-ede akụkọ ndụ a - Machị 2021 - ndị ịgba ọsọ bọọlụ ewerela ụzọ onye fọdụrụ. Ọ na-ewe ụzọ onye otu ya - Pedri Gonzalez.
Ilaix Moriba Ndụ Nke Onwe:
Mara ihe ndị na-eme na Midfield ga-enyere gị aka ịmatakwu ụdị onye ọ bụ. N'akụkụ a, anyị ga-aza ajụjụ a; Ọnye na-bụ Ilaix Moriba n'èzí football?
Ihe mbụ na mbụ, ọ bụ onye egwu egwuregwu na-egwu egwu nke toro PlayStation toro. Ingkpọ FIFA na-anọgide na-abụ oasis, ọrụ zuru oke iji jụụ mgbe ọ bụla ihe siri ike. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ọ na-eji nke ahụ anagide mmetụta ya.
Anyị na-ahụ Ilaix Moriba ebe a, na-ejide Playstation 5 Console ozugbo ọ bidochara ya. Ọ na-eso ụmụnne ya egwu egwuregwu. Ọ na-eso ụmụnne ya egwu egwuregwu.
Kemgbe ọ bụ nwata, igwu egwuregwu vidiyo emetụtala ike ezinụlọ Ilaix - n'ọtụtụ ụzọ. Dị ka ihe atụ, o meela ka mmekọrịta ya na ụmụnna ya sikwuo ike.
Ọzọkwa, na ndụ onwe onye, ​​ndị egwuregwu bọọlụ nwere ụzọ dị mma nke imebi ọsụsọ ya. N'akụkụ ụlọ mgbatị ahụ, ọ na -eme ọtụtụ ihe ọ na -eme n'elu ụlọ ezinụlọ ya. Nke a bụ vidiyo Ilaix Moriba idebe n'ụzọ nke ya.
Ilaix Moriba Web site Ndụ:
Ọ bụghị ihe nzuzo na ọ nwere mmasị ịme ihe (ụgbọ ala SUV okomoko, ụlọ, wdg) nke ọ nwere na -acha ọcha. Na ngalaba a, anyị ga -agwa gị gbasara ụdị ndụ Ilaix Moriba. Anyị
Anyị chọpụtara na ịnya ụgbọ elu ga-abụrịrị otu n'ime nnukwu ihe ọ ga-azụrụ tupu ọ baa ọgaranya.
Ilaix Moriba nwere ụgbọ ala egwuregwu Land Rover Discovery, nke na -efu ihe dị ka Euro 45,000. Anyị na -ese ya ebe a, n'akụkụ ụmụnne ya n'ihe yiri mgbapụta SUV ya.
Cargbọ ala Ilaix Moriba enweghị ntụpọ. Onweghị ihe dịka ego bọọlụ.
Ixlọ Ilaix Moriba:
Ịchọpụtala na ebe obibi onye egwuregwu bọọlụ nwere agba na agba ụgbọ ala ya? Enwere ihe niile na-acha ọcha-agba kachasị amasị ya. Ọcha ọcha nke ụlọ Ilaix Moriba na -anọchite anya ịdị ọcha n'onwe ya.
Ime ụlọ zuru oke nke ụlọ Ilaix Moriba.
Ilaix Moriba Ndụ Ezinụlọ:
Ha niile nọ ya n'akụkụ mgbe ọ na-enweghị onye na-agba bọl. Ndia bu ndi ezinaulo Ilaix Moriba. Akụkụ a ga-agwa gị ọtụtụ ihe gbasara ha, malite na isi ụlọ.
Banyere Mamady Kourouma, Nna Ilaix Moriba:
Ihe mbụ nke mbụ, ọ bụghị onye bịara ọhụrụ na mkparita ụka ma ọ bụ ihe dị ka onye isi oche mbufe. Mamady nwere ihe ọmụma banyere azụmaahịa bọọlụ.
Ọ na -eme mkpebi maka ụmụ ya nwoke. Nna mpako bụ ụdị onye anaghị ekwe ka ndị mmadụ metụta ya - na -agwa ya ihe ọ ga -eme ma ọ bụ ghọgbuo ya.
Nna Ilaix Moriba, Mamady Kourouma na-ewere ụzọ nzuzu na azụmaahịa football.
N'ịbụ onye na-akwụ ụgwọ site na ụgwọ nwa ya nwoke, Mamady nwetara ihe ọzọ 2.5 nde site na FC Barcelona n'oge nkwekọrịta nkwekọrịta kpụ ọkụ n'ọnụ. Ọ kesara ego ahụ n'etiti ndị ezinụlọ ya na Jonathan Barnett (onye nnọchi anya Ilaix Moriba).
Ezinụlọ Mamady Kourouma esila Afrịka bịa ogologo. Ọ kpụrụ Ilaix ka ọ bụrụ ihe anyị na -ahụ taa.
N'ihi ihe ịga nke ọma nwa ya nwoke, ndị otu na -eduhie Mamady mgbe niile. Klọb ndị a chọrọ ịkwụ ezinụlọ ya nde kwuru ka Ilaix gwuo egwu maka ha.
Banyere Aissata Kourouma, nne Ilaix Moriba:
Nnukwu nne ndị Afrịka emepụtala kpakpando bọọlụ a na -eme ememe, ọ bụghịkwa otu a. Mgbe o mechara ihe mgbaru ọsọ mbụ ya na Bar Barcaa, Ilaix nyefere ya maka mmezu nne ya.
O mere ka ụwa mata na ọ nọnyeere ya n'oge nsogbu na ihe isi ike. N'ikwu nke a, site n'aka ya, ọ gụrụ akwụkwọ nke ọma.
Banyere ixmụnna Ilaix Moriba:
Chi nke bọọlụ ji ụmụ nwoke na -agba bọọlụ mara ezinụlọ Kourouma nke mara ka ha ga -esi kwado ibe ha.
Nke kacha ewu ewu na nwanne Llaix Moriba bụ Lass Kourouma, onye na -egwu Levante UD - n'oge edere. Nke a bụ ụmụnna kacha nso n'ụlọ ezinụlọ Spanish ha.
A na -ese foto Lass Kourouma n'akụkụ nwanne ya nwoke na -eme nke ọma.
Nwanne nwoke ọzọ bụ Eze Siriki Kourouma, onye bụkwa onye egwuregwu bọọlụ. Ka ọ na -erule 2021, ọ na -egwu maka CE Sabadell FC. Nke a bụ ndị otu egwuregwu bọọlụ Spanish dabere na Sabadell, obodo dị na Barcelona. Dị ka Lass, ọ bụ nnukwu onye na -akwado Ilaix - onye na -akpa afọ ezinụlọ.
Ilaix Moriba enweghị enyi nwanyị ka m na-ede Bio ya; nwanne ya nwoke King Siriki di na nwoke na nwanyi. Nke a bụ vidiyo nke onye Guinea na nwa agbọghọ mara mma ya na Spanish, bụ onye dị n'ime ya.
Ezigbo Moriba Eziokwu:
N'ịchịkọta akụkọ ndụ onye ọkachamara anyị, anyị ga-eji ngalaba a gosipụta eziokwu ndị ọzọ gbasara ya. N’atufughi oge, ka anyị bido.
Eziokwu # 1 - Ebumnuche Ebumnuche ya na nwanne ya:
Ihe mgbaru ọsọ mbụ nke Ilaix maka Barca dabara na Ansu Fati. Ị maara? ndị egwuregwu bọọlụ abụọ gbara ọkpụ goolu ha gbatụrụ iche n'otu ama egwuregwu ahụ. N'ikwu nke a, ha bụ akụkụ nke ntọala ndị ntorobịa nke Barcelona.
Eziokwu # 2 - N'iji hisgwọ ọnwa ya na Nkezi Obodo:
Kemgbe ị bidoro ilele Ilaix Moriba'Bio, nke a bụ ihe ọ rụpụtara na Barcelona.
BARCELONA ụgwọ (€)
Kwa Afọ: € 666,666
Ọnwa kwa: € 55,555
Kwa Izu: € 12,800
Kwa :bọchị: € 1,828
Kwa elekere € 76
Nkeji nkeji: € 1.2
Kwa Nke Abụọ: € 0.02
You Maara?… Nwa amaala Spanish nke na-akpata euro 28,000 kwa afọ ga-arụ ọrụ maka afọ 23 na ọnwa 6. Ha ga-anọ ogologo oge iji nweta ụgwọ ọnwa Ilaix Moriba na Barca.
Eziokwu # 3 - Net Worth:
Ịbịanye aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya na Jenụwarị 2019 na-egosi otu afọ nke ahụmịhe ọrụ kemgbe ekepụtara Bio a. Site na ụgwọ ọnwa ya ugbu a nke € 666,666 kwa afọ, anyị na -etinye ụgbụ ya ihe dịka nde euro 1.
Eziokwu # 4 - Ilaix Moriba Religion:
Aha ndị mụrụ ya bụ Arabic ma jiri ya na Islamic West Africa. Mpaghara Islam bu 85% nke ndi Guinea. Ilaix so na 4.45% nke ụmụ amaala Spanish bụ ndị Alakụba.
Eziokwu # 5 - Ilaix Moriba FIFA Profaịlụ:
Ezigbo ndị hụrụ ọnọdụ ọrụ n'anya. Ka e were ya na ị na -achọ iwulite otu egwuregwu nke nwere ndị ntorobịa. Anyị na -akwado Ilaix Moriba ka ọ bụrụ nhọrọ etiti etiti gị.
Yana na -eto eto starlets dị ka Ji-Jana Hoever, ọ ga -enyere aka gbanwee ndị otu gị. Ọzọkwa, ị ga -ahụ ọsọ ọsọ ya dị oke egwu n'oge oge na -abịa.
Nnwale uto FIFA ya ga-eme ka ị mata na ọ bụ otu n'ime ihe kacha zoro ezo maka oghere etiti.
Na vidiyo dị n'okpuru, ọ na -amalite njem ndụ ya dị ka onye na -atụ egwu etiti wee wee bụrụ onye ama ama.
Ilaix Moriba Biographical Enyocha:
Maka azịza ngwa ngwa maka ajụjụ gị gbasara ndị egwuregwu bọọlụ amụrụ na Guinea, jiri nwayọ jiri tebụl Wiki anyị n'okpuru. Ọ chịkọtara akụkọ ndụ Ilaix Moriba.
Aha zuru ma ọ bụ ezigbo: Moriba Kourouma Kourouma
aha otutu: Ilaix
Age: 18 afọ na ọnwa 8.
Ụbọchị ọmụmụ: Daybọchị 19th nke Jenụwarị 2003
Ebe amụrụ onye: Conakry, Guinea
Ndị nne na nna: Aissata Kourouma (Nne) na Mamady Kourouma (Nna)
Ụmụnna: Eze Siriki Kourouma na Lass Kourouma
Nationality: Republic nke Guinea na Spain
elu: 1.85 mita ma ọ bụ 6 ụkwụ 1 sentimita asatọ
Ihe akara Zodiac: Capricorn
Agụmakwụkwọ Bọọlụ: Espanyol na La Masia de Can Planes
Akụkọ ndụ Ilaix Moriba malitere n'Africa, kpọmkwem na Guinea. N'ịga na ezinụlọ ya na Spain, ọ nakweere nnukwu ụwa egwuregwu.
Kemgbe ahụ, ya, ya na ụmụnne ya, kpebiri na ịgba bọọlụ ga -abụ nnukwu akụkụ nke ọdịnihu ha. Site na nkwado nne na nna ya (Aissata na Mamady Kourouma), nwa anyị nwoke nwere obi ụtọ imezu ebumnuche ya.
Akụkọ ihe mere eme nke Ilaix Moriba bụ maka nkwenye onwe onye na ntụkwasị obi. Ugbu a ọ na -eme nke ọma, nnukwu ajụjụ bụ; Ọ ga -eso ndị otu mba Guinea?
Ọ bụrụ na Ilaix emee, mgbe ahụ ọ ga -abụ dike mba. Ọtụtụ ndị na -akwado Guinea enweghị ike ichere ka ọ gbakọọ n'akụkụ Naby Kieta.
Daalụ maka ịnọnyere Lifebogger n'oge niile anyị ga-echeta na Ilaix Moriba. Dị ka oge niile, anyị na-agba mbọ iji weta gị Akụkọ Afrika Football. Jiri nwayọ mee ka anyị mara ma ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị mma na Bio a gbasara onye egwuregwu bọọlụ amụrụ na Guinea.